Gadzirisa mushandisi uye password kukanganisa muICloud | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa iyo iPhone inoramba ichikumbira yako iCloud zita rekushandisa uye password
Alejandro Cabrera | | ICloud, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Ichi chidhara chekare, asi icho chatinoramba tichiona, kunyangwe mushure mekupedzisira kugadzirisa kune iOS 9. Dzimwe nguva iyo iPhone inopinda mune chiuno uko inoramba ichikumbira yako data kubva iCloud kuwana, mushandisi uye password. Kunyangwe iwe paunopinda yako Apple ID uye password, iko kukanganisa kunoita kuti iwe ubvunze zvakare uye zvakare (uye zvakare, uye zvakare) zita rekushandisa nephasiwedi, zvinosemesa, handiti?
Kuva ne iPhone yakanamatira muICloud yekuisa loop kunogona kunetsa zvakanyanya. Neraki, rubatsiro rwave pedyo. Muchikamu chino isu tine mhinduro shanu dzakasiyana dzeICloud yekuisa chiuno.
1 Slide kudzima
3 Tarisa kuti iCloud iri kushanda
4 Dzorerazve password yako
5 Negadziriro yeparutivi uye kudzorera iPhone
Iko kukanganisa mukupinda humbowo hweICloud kunogona kukonzerwa ne kukanganisa kweWi-Fi , uye nzira iri nyore yekugadzirisa iri dzima iPhone uye mushure mechinguva dzokazve. Izvi zvinongotora maminetsi mashoma, uye kana dambudziko rikagadziriswa, richakuchengetera imwe tani yemimwe mhinduro kuchinetso iwe chaunogona kuyedza. Tevedza nhanho idzi kudzima yako iPhone uye woidzosera pairi:
Batisisa pasi bhatani kukiya / kumuka (pamusoro peiyo iPhone, kana kurudyi kana iri yemhando yechizvino) kwemaminitsi mashanu kusvika sarudzo yekudzima yaonekwa.
Rova zvakasimba the Power kure Icon kurudyi.
Mirira anenge masekondi makumi matatu kuti skrini riende rakasviba.
Dhinda bhatani reKiki / Wake kuti udzore foni yacho.
Kana yatovepo, zvinotora nguva iCloud isati yatanga. Yako Apple ID uye password zvinogona kukumbirwa, kana zvangopinda iwe haufanire kuzokumbira zvakare.
Kana kugadzirisa yako iPhone hakugadzirise dambudziko, edza mbudo iCloud uye kusaina zvakare. Tevedza nhanho idzi:
Enda ku Zvirongwa> iCloud.
Mupumburu pasi uye vawane Saina kure.
Vimba Sign Sign.
Press on Bvisa kubva ku iPhone.
Zvino tinya Log in.
Pinda yako Apple ID uye password.
Izvi iCloud itangezve anogona kugadzirisa dambudziko iri mubvunzo.
Tarisa kuti iCloud iri kushanda
Usati waenderera mberi, tinokurudzira kuti utarise izvozvo ICloud inoshanda nemazvo.
Unofanira kuenda ku https://www.apple.com/support/systemstatus/ pane yako Mac kana iPhone uye tarisa kuti zvese masevhisi acho akasvibira. Kana paine dambudziko neICloud pane server yaApple, saka zvakanaka kumirira Apple kuti igadzirise mumaawa mashoma.
Dzorerazve password yako
Kana pasina rimwe rematanho ari pamusoro rakabudirira, uye Apple System Mamiriro akatobvumidzwa kushanda nemazvo, saka rinotevera danho ndere chinja yako Apple ID password. Zvinonetsa, asi dambudziko rinogadziriswa. Kuchinja password kuri nyore kubata kubva kuMac yako (kana Windows PC).
Vhura iyo Safari webhu browser uye enda ku https://appleid.apple.com
Dzvanya Shandisa password.
Pinda yako Apple ID uye tinya Inotevera.
Sarudza iyo email kusimbiswa kana kupindura mibvunzo yekuchengetedza uye tinya Inotevera.
Dzvanya Sarudzazve password.
Pinda nyowani nyowani mundima yepassword uye wobva wasimbisa password.
Iye zvino pinda pasiwedhi nyowani pane yako iPhone paakabvunzwa. Inofanira kugamuchirwa ne iPhone uye kugadzirisa dambudziko.
Negadziriro yeparutivi uye kudzorera iPhone
Kana iyo iPhone ikaramba ichikumbira iyo iCloud password, iwe watoedza kuyedza iyo iPhone kudzima nekuenderera, uchichinja yako iCloud password uye zvimwe sarudzo zvatataura pamusoro, ipapo yekupedzisira nhanho ndeye negadziriro yeparutivi uye kudzorera iPhone wako.
Iwe unozofanirwa kugadzira negadziriro yeparutivi iPhone wako kombiyuta nekuti hazvizokwanise kutsigira kuICloud.
Unganidza yako iPhone kuMac uchishandisa tambo yeUSB.
Dzvanya maDhivhisi uye sarudza yako iPhone.
Sarudza ita backup iyo pakombuta.
Dzvanya tsigira ikozvino
Mirira maitiro ekuchengetedza kuti apedze (iwe uchaona yebhuruu yekufambira mberi kubhawa kumusoro kweTunes).
Kana zvapera iwe unogona kutanga iko kudzoreredza maitiro eiyo iPhone yako:
Chengeta yako iPhone yakabatana neMac.
Dzvanya Zvirongwa> iPhone> iCloud.
Dzvanya paKutsvaga yangu iPhone.
Dzima Tsvaga yangu iPhonee.
Pinda yako Apple ID pasiwedhi uye tinya Deactivate.
Kudzoka muTunes pane Mac yako, tinya Dzosera iPhone.
Tevera iyo yekudzoreredza maitiro uye shandisa iyo Backup iwe yawakangogadzira isati yadzoreredzwa maitiro. Enda unotora ichangoburwa vhezheni yeApple kubva kuApple, uye dzorera yako iPhone uchishandisa backup.
Nerimwe rematanho aya iwe unofanirwa kunge wakagadzirisa dambudziko iro rako Apple ID nephasiwedi zvinogara zvichikumbirwa pane chako chishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » ICloud » Maitiro ekugadzirisa iyo iPhone inoramba ichikumbira yako iCloud zita rekushandisa uye password
David C ++ akadaro
Mhoroi, izvi chete zvinoitika kwandiri: O, ini ndachinja password uye kumisikidza zvese zvishandiso zvangu, asi zvinoramba zvichioneka pane yangu iPhone 6, iPad Air uye Macbook pro. Zvakadaro zvisina kugadziriswa.
Pindura kuna David C ++
Alejandro Cabrera akadaro
Mhoro David, Wakagadzira iwo mashanu mhinduro dzinogona?
Pindura kuna Alejandro Cabrera
ZVINOITIKA KWANGU NESHURE YANGU YESHUMI IPODI, NDICHAEDZA NENHANZISO YOKUPEDZISA CHIKONZERO CHEKUONA KUTI UONE KANA DAMBUDZIKO RISINGARAMIRI.
Ami anoitika kwandiri neAppStore ini handigone kurodha pasi kana kugadzirisa chero chinhu chandisingazive chekuita ini handidi kurasikirwa nejailbreack
Mhoroi, ini ndakaita nhanho dzese uye ini ndichine dambudziko rakafanana, ndine chimwe chishandiso muaccount imwe uye chinoshanda zvakakwana, ndinopinda kubva pc uye zvinondibvumidza kupinda muacloud account uye hapana chimwe chandinofunga, mumwe munhu anoziva mhinduro
Hapana imwe yemaitiro yakandishandira. Iyo nhare nyowani uye haindibvumidze kuti ndiite backup nekuti haina kugadzirirwa (apo ini ndatodzorera yangu yapfuura iPhone pane ino). Iyo inondipa iyo yekugamuchira meseji, ini ndinoivhura uye inoenda yakanangana neApple ID skrini, uko inondipa iro dambudziko.
Izvozvi ndinodemba zvachose zuva randaive neangu yekutanga iPhone
Kunyangwe isina kubatana kunetiweki, inogara ichindibvunza kuti ndibatanidze kuICloud. Ini handitombo kana kuverenga peji chinyararire.
Japan Ratidza kugadzirira kugadzira AMOLED kuratidza kwe iPhone muna 2018
Apple anoongorora bato rechitatu anoti iPhone diki haizobatsire kambani